Taaksiin Finfinnee tankaarfii hujii dhaabuu cimaa fudhachuudhaan mootummatti bowwoo biraa fidan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Taaksiin Finfinnee tankaarfii hujii dhaabuu cimaa fudhachuudhaan mootummatti bowwoo biraa fidan
Taaksiin Finfinnee tankaarfii hujii dhaabuu cimaa fudhachuudhaan mootummatti bowwoo biraa fidan
Osoo hin mari'achiisnee fi dantaa ummataa xiyyeeffannaa keessa hin galchine imaammataa fi seerri mootummaan baasu ibidda itti ta'utti jira.
Seera taaksii haarawa mootummaan Gurraandhala 22, 2016 hujii irra oolche mormuudhaan taaksiin magaalaa Finfinnee guyyaa har’aa tankaarfii hujii dhaabuu fudhataniiru. Gatiin boba’aas akka hir’atu gaafatu. Akka waamicha konkolaachistootaa fi abbootii taaksiitti tankaarfii hujii dhaabuu kan turu guyyaa lamaaf: Gurraandhala 29 hanga Bitootessa 1’tti.
Waamichi konkolaachistoonni taaksii woliif godhan guutummatti dhageettii argateera; har’a daandiin Finfinnee qullaadha. Tankaarfii konkolaachistoonni taaksii fudhatn kanaan magaalaan Finfinnee guutummatti laamshofteerti. Taaksii kuma 10 ol ta’aniidha kan guyyaa hara’aatti tankaarfii hujii dhaabuu kan irraa qooda fudhatan. Taaksiin Finfinnee guyyatti naannoo namoota miliyoona 2 deddebisaa kan ooltu ta’uu isaati ragaaleen kan mul’isan.
Taankaariifin taaksiidhaan fudhatame hangam cimaa akka ta’e kan hubate mootummaan seericha guyyaa har’aa hujii irra ni oola jedhamee ture baatii sadiin gara funduraatti (hanga dhuma Caamsaatti) butuu isaa labsuudhaan taaksiin hundi hujii akka eegalan waamicha dhiyeessee ture. Waamicha mootummaa kana kan dhagaye ammatti hin jiru. Gaafiin konkolaachistootaa fi abbootii taaksii: Seerichi guutummatti haqamuu qabaadha. Ibsa mootummaan laate booda hojjattoonni biiroo geejjibaa Finfinnee magaalaa keessa deemaa laakkofsa gabatee taaksii hujii dhaabanii galmeessaa jiraachuun hubatameera. Kuni gocha, akkuma adeeffatame, sodaachisa fi doorsisaati.
Seeri haarofni taaksii kuni konkolaachisaan taaksii namoota karaa irra darbanitti bishaan facaasuu fi sagalee hin barbaachisne dhageessisuun kan adabbii nama saaxilu ta’uu ibsa. Bishaan facaasuu fi sagaleen nama jeequun waan fudhatama qabuu miti. Rakkoon kan jiru, daandiin biyyattii, keessumattii yeroo gannaa harooon kan irra canbalaqeedha. Konkolaachisaan bekaaati moo dirqameeti kan bishaan namootatti facaase? Ammas, yakki konkolaachistoonni irra deddeebi’aa raawwatan hanga hayyama dhabuutti nama geessa. Hunda caalatti madda rakkoo kan ta’e badii konkolaachistoonni rawwatan jedhamuu fi sadarakaa badii raawwatamee kan murteessu eenyu isa jedhu. Seericha keessatti kan labsame angoon kan murteessuu kan tiraafiikotaati. Traafikoonni biyyattii dhoqqee malaanmaltummaatti dhuubaman dhiiga kan ummata boochisaa turan. Seerri kuni daran haalicha hammeessa, traafiikota kaniiniin seeyfii ittiin nama goorra’an hidhachiisa jedhu worri seericha qeeqan.
Seeri kuni kan barbachiseef, akka mootummaan jedhutti, seera dhabdummaa hanbisuu fi balaa konkolaataan ummataa fi qabeenya irra gayaa jiru hir’isuuf. Itoophiyaa keessatti woggatti namoota 4000’tti tilmaamamana kan balaa tiraafiikiitiin lubbuu dhaban. Namoonni kuma 10tti tilmaaman madaa sadarakaa addaddaaf saaxilamu. Woggatti qabeenya Birrii biliyoona tokkotti tilmaamamuudha kan balaa tirafiikiin manca’u.
Seerri kuni bayuun duratti bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi mootummaan federaalaa konkolaachistoota, abbootii qabeenyaa fi hawaasa mari’achiisuu dubbata. Mariin akka hin godhamnee ykn wolhubannoo irra akka hin gayamne kan argisiisu tankaarfii hujii dhaabuu taaksii amma fudhatame kana. Mootummaan, ummata dhimmi kallatttiidhaan ilaallatu dalgatti jedhee, eennun akka mari’achiise isumatu beeka.
Mootummaa Woyyaanee kallattii hundaan rakkoon itti baay’ataa fi mormiin itti hammataa dhufaa jira. Woggoottan 25 dabrabn keessatti kan kadireen TPLF hin boochinse, inni imaammanni Woyyaanee jireenya hin dhoorgine hin jiru. Imaammata mootummaa kan ummata hirmachise fi tankaarfii fudhataman seera qabeessa taasisuudhaaf dhiibbaan barbaachisu hundi kallattiin hudaan godhamutu irra jira. #OromoProtests fi konkolaachistoota qofa osoo hin taane sabootaa fi qamni hawaasaa hundi (barsiistonni, hojjatoonni, qotee bultoonni fi daldaltoonni) sirnaa fi imaammata TPLF, isa gabroomsaa fi hiyyoomsaa, mormachuu fi obboleewwan isaanii cinaa dhaabachuu qaban. Mootummaa kana jilbiiffachiisuudhaaf hiree amma uumamaa jiran kanatti fayyadamanii rakkoo fi gidiraa ganna 25tti xumura laatuun gamnummaadha ta’uu dubbatu hayyoonni siyasaa.
hujii dhaabuu taaksii finfinnee
mormii taaksii finfinnee
seera taaksii haarawa
Previous articleBalaaleffannaan gocha faashistii Woyyaanee biyyoota addaddaa keessatti cimee itti fufee jira
Next articleNaannoo Gambeellaatti Investaroonni lafa heektaara kuma heddu ‘dogoggoraan’ fudhatan jedhaman akka deebisan gaafataman